CCNA Certified Professionals - Hurukuro Nemibvunzo Uye Mhinduro - ITS
Bvunzurudza Mibvunzo uye Mhinduro YeCCNA
CCNA kana "Cisco Certified Network Associate" chiyeuchidzo ndechekumira pakati pevakatarisa zvakadzama pashure peCISCO zvigadziro munyika yose. Kune vanopfuura mamiriyoni emamiriyoni eCISCO vadzidzisi kunze uko vanoshumira nhamba yakawanda yediki uye yakawanda masangano akaenzaniswa kusanganisira MNCs. CISCO ndiyo yakakura IT uye sangano rekubatanidza kwenyika pasi uye zvakare CCNA certification inonyanya kukosha uye inopa mubhadharo wakakura uye zvakasiyana-siyana zvinobatanidzwa. Muitiko apo iwe uri CCNA unyanzvi hwakagadziriswa, pasi pemibvunzo yakapiwa zvichida inouya apo iwe unosangana nehurukuro yako yezvenyanzvi. Dzidzai ivo vachiramba vachifunga mupfungwa yekupedzisira kuti vagadzirire zvakanaka nokuda kwekuuya nekuuya kwevashandi kusangana-up uye kuibvisa zvakajeka.
Chii chiri kugadzirisa?
Kuenderera mberi ndiyo nzira yekutora Packet kubva kune chinangwa chokugadzirisa chinangwa. Shandura ndiro gadhi rinoshandura, rinoenderana nechinangwa ip address. Shandura inoita nzira iyi inomhanya kuburikidza nekudzivirira.
Ndeipi chikamu cheData Link mukutengesa?
Izvi zvinogadzirisa kuti data yakagadzirirwa nzira yakarurama, inobata nzvimbo yekukanganisa uye inoita kuti data ibudiswe zvakajeka. Iyi inzvimbo apo "Ethernet" inorarama. Macintosh Address uye Ethernet zvinyorwa zviri pa Data Link layer.
Sei kushanduka kushandiswa sechikamu chekubatanidza?
Kuchinja kunofanirwa kuwedzera mambure nenzira yakakodzera. Shanduko inowanzoita gadget ye2, saka ita kutarisa mukati mekuona kero ye macintosh, zvichidaro kuwedzera kukurumidza.
Chii chinorehwa nekubatana kwemagetsi?
Panguva iyo vatengi vakasiyana-siyana (kupfuura kudarika kwepamusoro nehutano hwe network network) vanoshandisa kana kuedza kushandiswa kwehutano hwehutachiona humwechete, kuvhara kunoitika, sezvo muteresi unorega kubvumira vatengi vakasiyana-siyana. Kubvira pakaderera purogiramu yehutachiona haina nzvimbo yakakwana yekubata data, mushure mokunge data inodonhedzwa.
Ndeipi basa rebhiriji? Inogona kuparadzanisa mambure muzvikamu zviduku kana zvikamu here?
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa mumatare, asi zvisingachinje uswa hwayo. Inopfuura mapepa eData pakati pezvimwe zvikamu zve 2 zvese zvinoshandiswa zvakafanana uye imwe yemagungano emhando.
CISCO Catalyst mabasa kuburikidza nei LAN kuchinja protocol?
CISCO Catalyst 5000 inoshandiswa "slice kuburikidza" nekugadzira kokorodzano uye nzira. Slice Kupfurikidza nekushandura kunotanga kutumira muganhu apo iyo yero yekutsva inozivikanwa. Kusiyana pakati peizvi uye Chengetedza-uye-Kutarisa ndicho Chekuchengetedza-uye-Pamberi kunowanikwa keseji kusati yatumira. Nyaya yekuchengetedza uye mberi ndeyeCatalyst 2960 uye 2960-S
Tsitsi 3750-X uye 3560-X.
Kubva pane zvinyorwa zvisinganzwisisi hazvikwanisi kuonekwa kuburikidza nekushandisa padziri iyo kero yekutsvaga, Cut-Through inogona kukanganisa mitambo yekutengesa nekutumira kusvibiswa kana kutorwa kwematombo. Iyi mitsara yakaipa inogona kuita dutu rekukurukurirana uko mune zvigadzirwa zvishomanana pamutambo unoita kune zvinyorwa zvisingatauri nguva yose.
Ipi basa rinoitwa ne LLC LLC?
LLC kana Logical Link Control layer yakakosha pakupa mamwe maitiro kune chero chigadziro chekushanda. Semuenzaniso, inogona kupa hutungamiri hwekutonga kwekushandisa kuburikidza nekushandisa nekushandisa mavambo ekutanga / kumisa. Icho chinyorwa chinogonawo kushandiswa kugadzirisa kwekanganiso.
Basa ripi rinoshandiswa pakushanda kwekushandisa pakusangana?
I3 zvinhu zvinonyanya kukosha zvekushanda kwekushandiswa ndezvi:
Uyu ndiwo mutsara unopa hutauriri pakati pevatengi uye kushandiswa.
Iyi ndiyo mhedzisiro inopa kuwanika kwekushandiswa kwakasiyana, sekutumira, mahofisi ekutumira, webhutungamiri hwehutungamiri, zvinyorwa zvinyorwa nezvimwe zvakadaro.
Kugadzirisa uye kugadzirisa maitiro evose mutengi uye sevha.
Ndeupi musiyano pakati peGRP naRIP?
Kunyange zvazvo IGRP ichiongorora zvinhu zvakadai semhando isingaverengeki, simba rekuwedzerwa kwemashoko, svetuka tally uye MTU kugadzirisa uye kupa mhando yakanakisisa yekugadzira mitambo, RIP inongobva chete nhamba dzekudzidzira kuti uzive nzira ipi inogona kushandisa zvakanakisisa kune unhu.
Chii chinorehwa naBhoot P?
Zvivako zvisingashandisi mahwendefa uye zvinosanganiswa neipi ipi neipi yakagadziriswa zvinoshandiswa nekushandisa musangano weBoot P. Izwi racho rinoramba riri re "Boot Program". Zvimwe kunze kweizvi, Boot P inowedzera kushandiswa nemabasa ekudzidzira kuziva kero yekwavo, uye kero ye IP ye server.
Iyi mibvunzo mashomanana inogona kubvunzwa mubvunzurudzo. Izvo zvingaita, mibvunzo inogona kubva pane imwe nyaya yawakamboongorora pakati pekufungisisa kweCACNA certification. Iwe unofanirwa kuona zvinhu zvose uye unofunga mberi kusvika pasi kuti usangane nehurukuro yacho nehumwe chokwadi. Izvi zvaizoitawo saizvozvo kubudirira kwako.